ရေချိုးခါနီး မှာ ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာခဲ့ရင် သတိထားပါ – Shwe Yaung Lan
HomeUncategorizedရေချိုးခါနီး မှာ ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာခဲ့ရင် သတိထားပါ
ရေချိုးခါနီး မှာ ချမ်းစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာခဲ့ရင် သတိထားပါ
စာရေးသူ – ဒေါက်တာ ခင်မိုးမိုး
ခေါင်းကနေ ရေစတင်လောင်းချိုးတာက လေဖြတ်တတ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းမှ စ၍ ရေလောင်းမချိုးသင့်ပါ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်မတို့ဟာ သွေးနွေးသတ္တဝါများဖြစ်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က အပူချိန်ကို အလျှင်အမြန် ထိန်းညှိနေရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ခေါင်းကို ရေလောင်းစဉ် ခေါင်းအေးသွားတဲ့ အတွက် အပူချိန်ထိန်းညှိနိုင်အောင် ခန္ဓာကိုယ်က သွေးတွေက ခေါင်းကို အလျှင်အမြန် လာကြတာကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက် လွယ် သွားပြီး လေဖြတ်ကာ လိမ့်ကျသွားတတ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရေချိုးတဲ့အခါမှာ ခြေထောက်ကနေ စတင်ရေလောင်းပြီးမှ တဖြည်းဖြည်း အပေါ်ပိုင်းကို ဆက်လောင်းချိုးပါ ။ အထူးသဖြင့် သွေးတိုးရောဂါရှိသူ သွေးတွင်းကိုလက်ထရောမြင့်တက်သူနဲ့ ဦးခေါင်းတခြမ်းကိုက် ဝေဒနာခံစားရသူတွေ ဒီရေချိုးနည်းကို လိုက်နာသင့်ပါတယ် ။
ရေချိုးတဲ့အခါ ခြေထောက်ကို အရင် ရေလောင်းပါ တဖြေးဖြေး ဒူး ပေါင် ခါး လောင်းပြီးမှ တကိုယ်လုံးရေချိုးပါ ။ ရေ အဆင့်ဆင့် လောင်းနေစဉ် ပါးစပ်ထဲမှာ ရေငုံထားတာဟာ ကိုယ်ခန္ဓာကို ရေလောင်းလို့ ထွက်လာတဲ့ အပူခိုးတွေမျက်စိကို မရောက်အောင် အကာအကွယ်ဖြစ်စေပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကို အဆင့်ဆင့် ရေလောင်းနေတုန်း ချမ်းစိမ့်စိမ့် ဖြစ်လာရင် ရေဆက်မချိုးပါနဲ့ ။ ရေချိုးလို့ ဖျားတယ်ဆိုတာက အပူရှိလို့ အပူငုတ် အပူရှပ်ချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အပူထဲမှလာပြီး ချက်ခြင်း ရေမချိုးပါနဲ့ ။ ထမင်းစားပြီး ရေမချိုးသင့်ပါ ။ ရေမချိုးခင် ရေ ဝ အောင် သောက်ပါ ။ ရေချိုးပြီးရင် ရေကို စင်အောင်သုတ်ပြီး ရေနွေးသောက်ပါ ။
ရေချိုးလို့ ရနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးများ ………
ဆီးချိုရောဂါရှိသူ တစ်ယောက်က နာရီဝက်ကြာ ရေချိုးမယ်ဆိုရင် သွေးထဲက သကြားဓာတ် ၁၃ % လျော့နည်းပါတယ်။ ရေနွေး ၃၂ . ၃၅ ဒီဂရီကို ချိုးရင် အရေပြားက အပေါက်လေးတွေကို ပွင့်စေပြီး အဆိပ် အတောက်တွေ ထွက်ကုန်မယ် ကြွက်သားနာတာ သက်သာမယ်။ အူတွေ ပို အလုပ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရေချိုးတာကို ၁၈မိနစ် ၂၀မိနစ် သာကြာပါစေ။ ရေနွေး ၁၂ . ၁၈ ဒီဂရီကို ချိုးရင် စိတ်ဖိအား ကျစေမယ်၊ သွေးကြောလေးတွေကို ကျဉ်းစေလို့ သကြားဓာတ် တက်စေမယ်။
အင်ပြင် ထ တာမျိုးကို Sodium Bicarbonate ( ဆော်ဒါ ) ပါတဲ့ ရေချိုးရင် သက်သာပြီး ပိုးတချို့ကိုလည်း သေစေပါတယ် ။ ရေနွေးနဲ့ ချိုးတာဟာ တုတ်ကွေး အအေးမိတာ သက်သာစေပြီး နင်းခူနာကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
ရေအေးထဲမှာ ခြေထောက်ကို စိမ်ပေးရင် ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေပါတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အသည်း အလုပ်လုပ်ချိန်ဟာ ည ၁၁နာရီ မှ ၃ နာရီအထိဖြစ်ပြီး ကျောက်ကပ် အလုပ် လုပ်ချိန်ဟာ ညနေ ၅ နာရီ မှ၇ နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီအလိုက်ရေချိုးချိန်ဟာ နွေ မှာ မနက် ၉ နာရီ မိုးတွင်းမှာ မနက် ၁၀ နာရီဆောင်းရာသီမှာ မနက် ၁၁ နာရီ ဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးပွ အရိုးပါး ဂေါက်ရောဂါ ရှိသူတွေအတွက် ရေနွေးထဲဆားခါး ထည့်ဖျော် ချိုးခြင်းဖြင့် နာကျင်ခြင်းကို သက်သာစေပါသည် ။
ညဖက်ရေချိုးခြင်း သတိထားရန် ………
ခေါင်းလျှော်လျှင် မအိပ်ခင်မှာ ခြောက်အောင် သုတ်ပြီးမှ အိပ်ပါ။ မိမိကိုယ် အပူချိန်က နေ့ခင်းဖက်မှာထက် လျော့ကျနေသည်ကို သတိပြုပေးပါ ။ မနက်ခင်း လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုခုလုပ်ပြီးမှ ရေချိုးတာကြွက်သားတွေကို ပိုမိုသန်မာစေပါတယ် ။
ကယ်လီးဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်မှ သုတေသနပညာရှင်များအဆိုအရ မနက်ခင်းအေးတဲ့ရေနဲ့ ရေချိုးခြင်းက သုပ်ပိုးများကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးတစ်ခွက် ……
ညနေပိုင်းရေချိုးလျင် သတိထားရန်မှာ ညနေ ၅ နာရီမှ ၇ နာရီရေချိုး နေစဉ်တွင် ဆီးမသွားရပါ။ ထိုအချိန်ဟာ ကျောက်ကပ် အလုပ်လုပ်နေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောက်ကပ် မပျက်စီးအောင် ဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မနက်ခင်းရေချိုးခြင်း၏ ကောင်းကျိုး ……
မနက်ခင်းရေချိုးခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာတွင်းမှ အပူခိုးများကိုထွက်စေပါတယ်။ ရေနွေးနဲ့ချိုးမယ်ဆိုရင် သွေးလည် ပတ်မှုကောင်းစေပြီး ကြွက်သားများကို တောင့်တင်းသန်မာစေတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးကိုများစွာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။
မနက်ခင်း ရေချိုးခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေတဲ့အတွက် စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်နေရင် မနက်ခင်းရေချိုးသင့်ပါတယ်။
ခေါင်းလျှော်လျှင် မအိပ်ခင်မှာ ခြောက်အောင်သုတ်ပြီးမှ အိပ်ပါ။ မိမိကိုယ် အပူချိန်က နေ့ခင်းဖက်မှာထက် လျော့ကျနေသည်ကို သတိပြုပါ။ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ချင်လို့ ရေချိုးတာဆိုလျှင်တော့ မအိပ်ခင်လေးမှာ အချိန်ခွာပြီး ရေချိုးပေးပါ ။
ကိုယ်ကာယ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးစမှာ ချွေးပေါက်လေးတွေ ကျယ်နေတဲ့အတွက် ချက်ခြင်း ရေမချိုးသင့်ပါဘူး။ မိနစ် ၃၀ ခန့်စောင့်ပြီး ကိုယ်အပူချိန် လျော့ကျသွားပြီး ချွေးပေါက် ပြန်ကျဉ်းသွားချိန်မှ ရေချိုးသင့်ပါတယ်။
ညဖက် အရမ်းနောက်ကျရင် ရေနွေးနဲ့ချိုးပါ။ ရေနွေးနဲ့ မချိုးခင်မှာ ရေအပူချိန်ကို လက်နဲ့ ထိတွေ့ ခံစားကြည့်ပါ ။ ပုံမှန်အားဖြင့် လူကိုယ်ခန္ဓာ အပူချိန်ထက် ရေအပူချိန် ၅ ဒီဂရီ ထက်ပို၍သာ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ သာမန် အပူချိန်ကတော့ ၉၇ ဖာရင်ဟိုက် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ် လက်ခံနိုင်မယ့် မပူလွန်း မအေးလွန်း အနေအထားကို ရယူပါ ။
ရေချိုးခြင်းက စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ ပြန်လည်လန်းဆန်းအောင်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ရေနွေးနွေးနဲ့ ချိုးလိုက်ရင် အရေပြားပေါ်မှာ ရှိတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချကာ သွေးပေါင်ကျ တစ်နေ့တာကုန်သွားတဲ့ အားအင်တွေကို ပြန်ဖြည့်ပေးရုံသာမက တောင့်တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေ ကိုလည်း ရေချိုးခြင်းက ဖြေလျော့ပေးပါတယ်။
ရေနွေးနဲ့ ချိုးခြင်းက အရေပြားကို ချောမွတ်စေ နုပျိုလန်းဆန်းခြင်းကို ခံစားရစေပါတယ်။ ညဖက် ရေချိုးတာက ကောင်းသော ကိုယ်သင်းနံ့ကိုပေးတဲ့အတွက် နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေပါတယ်။ မျက်စိကြောင်ပြီး အိပ်မပျော်ခြင်းမှလည်းကင်းဝေးစေပါတယ်။ တတ်နိုင်ရင် ရေနွေးနဲ့ချိုးပါ။ ရေအေးနဲ့ ချိုးကြတဲ့အခါ ညနေပိုင်း အပူအခိုးထွက်နေတာတွေက ကိုယ်တွင်းသို့ ပြန်ဝင်တတ်ပါတယ် ။
အားလုံးဂရုပြုနိုင်ကြပါစေ ရှင့် ……
Credit – ဒေါက်တာ ခင်မိုးမိုး
သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူ ရေဝေးမှအပြန် ကားငါးစီးဆင့်တိုက်ခံရ
တော်ရုံမမြင်ဘူးသေးတဲ့ သူတို့မိသားစုရဲ့အရင်ကပုံလေးတွေကို ထုတ်ပြလာတဲ့ နိုင်းနိုင်း